Indlu esemaphandleni engaselwandle w/AC, kwiitafile eziyi-3, kufutshane neWaimea Bay - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni engaselwandle w/AC, kwiitafile eziyi-3, kufutshane neWaimea Bay
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguB
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uB iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ezona ntsuku zimbalwa zinokuhlalwa ziyi-29 ngokwemithetho yokuqeshisa yaseHawaii. Eli khaya le-3 br /2ba w/ac yeyona ndlu iselunxwemeni. Ukunqumla nokujonga ulwandle oludumileyo lokuqubha nokubhukuda, nokuhamba nje imizuzu eyi-2 ukuya eFoodland, iCoffee Bean, ukuqesha ibhayisekile/ibhodi yokusefa, kunye neenqwelo zokutya/iivenkile zokutyela zangaphandle eziliqela. Akukho mfuneko yemoto xa sele ufikile! Ukuhamba imizuzu eyi-5 ukuya eWaimea Beach nakwintlambo, kodwa esitratweni, kukho indawo yokupaka iimoto eziyi-2 ukuba uza nemoto.
Umatshini wokuhlamba impahla/Isixhobo sokomisa impahla eseyadini. Ii-air conditioner zisanda kufakwa kwigumbi ngalinye kumagumbi okulala ayi-3, kwaye kukho neefeni zesilingi kwigumbi ngalinye, nakwigumbi lokuhlala, kwigumbi lokutyela nekhitshi.
Nceda ungafaki imitshato okanye iipati. Elona nani likhulu leendwendwe ngu-6 ibe elona nani likhulu lendlu nanini na ngu-8. Sihlala kufutshane ibe siza kwaziswa ukuba oku kuyenzeka ibe ngokuvumelana nesivumelwano sokurenta, ukupheliswa kokuqeshisa kuza kukhawuleza.
Oku kukuqinisekisa ukuba abamelwane abakhathazeki, enkosi!
Le ndawo isandul 'ukulungiswa yaza yahlaziywa ngeefestile ezintsha, izinto zokogquma iifestile, ipeyinti (ngaphakathi nangaphandle), kunye nefenitshala entsha phantse yonke. I-lanai enkulu ejongene nolwandle inezitulo eziliqela zokuphumla, kunye netafile yokutyela yabantu abayi-6 eneambrela enelanga.
Inyama eyojiweyo ngoxa ubuka ulwandle, uze wonwabele ikhitshi elinento yonke kuquka into yokupheka irayisi, umatshini wokwenza ikofu, njl. I-Cable TV , i-Wifi Internet, iibhodi eziyi-2 zeBoogie, Izitulo ezi-2 zaselwandle kunye neetawuli. Iifeni kwigumbi ngalinye nendawo epholileyo yokushishina ukuze uhlale uthe zava.
Unxweme lweetafile ezintathu lunezinye zezona ndawo zintle zokuntywila/ukudayiva elunxwemeni, kunye nolwandle iCove yookrebe ekumgama wemizuzu emi-2 ukuya kwemi-3. Qaphela ukuba ngamaxesha athile onyaka, amaza asenokuba makhulu- nto leyo enokwenza kube nzima ukuqubha naphi na elunxwemeni, kodwa ukuba kunjalo, lixesha lokubukela ukusefa okumangalisayo. IPAKETHI YABANTWANA ayidlali endlini ukuze isetyenziswe ziindwendwe.
Eli likhaya oza kufuna ukubuyela kulo kwakhona!
Qaphela ukuba thina, ngokuvumelana nemithetho yokuqeshisa ngendawo yeholide, siqeshisa ngendlu ixesha elinye kuphela nyanga nganye, njengoko siyisebenzisela amanye amaxesha kufuneka uyibone igcinwe ngaphezulu kwexesha elinye ngenyanga. Sine- GET / TAT # yerhafu ebhatelweyo endinokukuvuyela ukwabelana ngayo xa ubhukisha le ndlu.
Enye yezona ndawo zibalaseleyo kulo lonke unxweme loMntla ngenxa yokuba kufutshane nolwandle oluphezulu, ukuthenga, ukunyuka intaba kunye neendlela zebhayisekile.
Umbuki zindwendwe ngu- B
We live on the N. Shore. We enjoy surfing, paddling, hiking and hanging out with our kids.
Sihlala kufutshane ngoko mna nomfazi wam siza kudibana nawe xa ufika.
Inombolo yomthetho: GET W271576576-01 TAT WTA-1271576576-02